By Step Asha | May 22, 2019
မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ်သာ သောက်ပေးရုံ
လိင်ဆက်ဆံချိန်ကို ၃ နာရီအထိ ကြာရှည်စေတယ်
ရလဒ်ကို ၁၀၀ % အာမခံချက်
၄ ပတ်အတွင်းမှာပဲ အရှည်နဲ့လုံးပတ်အရွယ်အစားပိုကြီးလာစေမယ်။ Hammer of Thor တကယ့်ရလဒ်အစစ်
HAMMER OF THOR ရဲ့လုပ်ဆောင်ပုံ
ထောင်မတ်တဲ့ လိင်တံတစ်ခုရဲ့ပျမ်းမျှအရှည်က ၁၃ – ၁၅ စင်တီမီတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိင်မှုကိစ္စသာယာမှုကို ခံစားနိုင်ဖို့ မလုံလောက်ပါဘူး။
တစ်လအတွင်းမှာ ဆေးကို နေ့တိုင်းသောက်ပေးပါ။
ဆေးတောင့်မှာပါတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက လိင်တံရဲ့ ထောင်မတ်တစ်ရှူးတွေဆီကိုနက်ရှိုင်းစွာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းစေပြီး အရှည်နဲ့အရွယ်အစား ကိုပိုကြီးစေပါတယ်။
တစ်လအတွင်းမှာပဲ လိင်တံက ၄-၅ စင်တီမီတာအထိကြီးလာပါလိမ့်မယ်။ ထောင်မတ်မှုကြာရှည်ခံပြီး ပိုရှည်လာမယ်၊ လိင်ဆက်ဆံမှုကြာချိန်က ရပ်နားမှုမရှိဘဲ ၃ နာရီအထိ ကြာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်အရွယ်အစားကို သတိထားမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ hammer of thor အသုံးပြုနည်း
သူ့ကို တစ်ချီတည်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အထွတ်အထိပ်ရောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု ၁၀၀ %
Hammer of Thor အကြောင်း ကမ္ဘာရဲ့ပြောကြားချက်။ Hammer of Thor လိင်တံကြီးထွားမှုအတွက် နံပါတ် ၁ ကုန်ပစ္စည်း
အမျိုးသမီး ၈၇% ဟာ လိင်တံကြီးတဲ့ လက်တွဲဖော်ကို စိတ်ကူးယဉ်ကြတယ်လို့ သုတေသီတွေက စစ်တမ်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လိင်တံက ၂၀ စင်တီမီတာထက်ပိုရှည်နေခဲ့ရင် ပထမဆုံးရက်မှာပဲ လိင်ဆက်ဆံဖို့ ၉၄%က လက်ခံကြလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အခုဆို ဒီတွေ့ရှိချက်အရ Hammer of Thor ကျေးဇူးနဲ့ လိင်တံပိုရှည်လာအောင် ဘယ်အမျိုးသားမဆို လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ အထူးလိင်တံကြီးဆေးက သင့်ကို ၄-၅ စင်တီမီတာပိုကြီးလာရုံမက အာရုံခံနိုင်စွမ်းကိုအားကောင်းစေတယ်၊ ထောင်မတ်မှုကို တာရှည်စေတယ်၊ ဆက်ဆံဖော်နဲ့သင့်ကို မေ့မရနိုင်တဲ့သာယာမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှု၊ရိုးနေပြီဖြစ်တဲ့လိင်မှုဘဝ၊စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိတဲ့ဆက်ဆံမှု၊ လိင်စိတ်ဆန္ဒမရှိတာ တွေက ယနေ့ခေတ်မှာ အမျိုးသားတွေကြား အဖြစ်များလာတဲ့ ပြဿနာတွေပါ။ ဒါပေမယ့် မကြာသေးခင်ကပဲ ဒါတွေအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ Hammer of Thor ပါ။ လိင်တံကြီးထွားစေတဲ့ ဥရောပရဲ့နံပါတ်တစ် ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတော်တော်များများကလည်း သူ့ရဲ့ရလဒ်ကို ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ကြည့်ပြီးကြပြီ။ ရလဒ်ကတော့ အရမ်းလန်းတယ်နော်။
ခုချိန်မှာ Hammer of Thor က လိင်တံကြီးထွားစေဖို့အာမခံတဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးလိမ်းစရာမလို၊ လက်နဲ့ကျင့်စရာမလို၊ခွဲစိတ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ သဘာဝကျကျပဲ ကြီးထွားလာမှာဖြစ်လို့ ရလဒ်က ထာဝရကျန်ရစ်နေမှာပါ။
Hammer of Thor ကတော့ တကယ့်ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက် လိုအပ်တဲ့အရာပါပဲ။လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင့်အယူအဆတွေကို ပြောင်းလဲစေပြီး သင့်ကို အမျိုးသမီးတွေရဲ့အသည်းစွဲ ဖြစ်လာစေပါလိမ့်မယ်။ တကယ့်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုတာ ဘယ်လိုလဲလို့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါ။
Hammer of Thor အဘယျမှာဝယျပါရနျ ဆေးတိုကျ စွေး အဘယျမှာဝယျပါရနျ
“သူမက တစ်ညကို ၅ ကြိမ်လာတယ် ” လိင်တံထောင်မတ်မှုက ၁ နာရီခွဲကြာခံအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ Hammer of Thor ပွနျလညျဆနျးစဈခကျြ
သူမ အော်နေတယ်၊ တဆတ်ဆတ်တုန်နေတယ်၊ အိပ်ရာခင်းတွေကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားတယ်။ အိပ်ရာပေါ်မှာလည်း အကွက်လိုက်စိုရွှဲလို့။သူမ ဒီလိုဖြစ်အောင် ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာ ဒါဆိုဒုတိယမြောက်ည။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်မရပ်ချင်ဘူး။သူမကို ထပ်ပြီးဆက်ဆံချင်နေသေးတယ် –
သူမကလည်း ကျွန်တော်ဆန္ဒရှိသလောက် လာပေးမှာပဲ။ ကျွန်တော့ခေါင်းထဲမှာ ဒီအတွေးက ဖျတ်ခနဲပေါ်လာတယ်။ စစချင်းတော့ တကယ့်ကို ယောကျာ်းပီသတဲ့လူလို့ ခံစားမိနေတယ်။
ကျွန်တော်က ပက်လက်လှန်နေတဲ့အချိန် သူမက ကျွန်တော့ရင်ဘတ်အပေါ်ပိုင်းကိုနမ်းနေတယ်။ သူမမျက်နှာပေါ် ခပ်ပြင်းပြင်း ပန်းထုတ်မိတာ ၁၀ မိနစ်ကြာတယ်။ အဲ့ဒီညမှာ သူမကတော့ အထွတ်အထိပ်ရောက်တာ ၄ ကြိမ်တောင်။
လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ အမျိုးသားတစ်ယောက်က ထောင်မတ်မှုလည်းမလျော့ဘဲ ဘယ်လောက်ကြာကြာ မရပ်မနား လိင်ဆက်ဆံနိုင်လဲဆိုတာပဲ။ အရင်ကဆို ကျွန်တော်က ၂ မိနစ်လောက်ဆို ပြီးတယ်။ ဒါပေမယ့် ၉ ရက်အတွင်းမှာ ဒီအချိန်ကို တစ်နာရီခွဲလောက်အထိ တိုးလာအောင် လုပ်ခဲ့တယ်။ ဘယ်အရာက ကူညီသလဲဆိုတော့ –
မြန်မာအမျိုးသား ၉၄%လောက်က ၃၅ မိနစ်ကျော် လိင်ဆက်ဆံနိုင်ကြတယ်။
သုက်လွှတ်စောတာက ပြဿနာ။ ဒါ့ကြောင့် မိနစ်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာ သင်ကပြီးသွားမယ်ဆို ဆက်ဆံရေးတွေအောင်မြင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်သိပ်မရှိတော့ဘူး။ အရင်ကဆို အိပ်ရာထဲရောက်တိုင်း တကယ်ရှက်စရာကောင်းခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့ဆော်တွေကို နားလည်တယ်။ တခြားယောကျာ်းတွေနဲ့ မိနစ် ၃၀-၄၀ လောက် လိင်ဆက်ဆံပြီးတဲ့သူတို့အတွက် ၂ မိနစ်လောက်နဲ့ပြီးသွားတဲ့ ကျွန်တော်က လာနောက်နေသလိုဖြစ်နေမှာပဲလေ။
သုက်လွှတ်စောပြီ ပန်းကညှိုးနေတော့ ယောကျာ်းအစစ်တစ်ယောက်လို့တောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မခံစားရဘူး။
ကျွန်တော့လိုပြဿနာရှိတဲ့အမျိုးသားတွေ အများကြီးရှိနေမယ်ထင်ပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံတာကြာနိုင်ရင် အရမ်းကောင်းမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် မကြာသေးခင်ကပဲ အဖြေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာ ဒီပြဿနာအကြောင်းတင်ကြတဲ့ ပို့စ်တွေထဲ တီးခေါက်ကြည့်လိုက်တော့ ပဉ္စလက်ဆန်တဲ့ ဆေးစွမ်းကောင်းတွေ၊ ဆေးပြား၊ဆေးဝါးနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေအကြောင်းတွေ့ပေမယ့် ဒါလည်းအဖြေမဟုတ်သေးဘူး။ အကျိုးမထူးတဲ့အပြင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင် ဒုက္ခရောက်စေမယ့်နည်းတွေချည်းပဲ။အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။
Hammer of Thor အကြောင်းကို ဆေးပညာဖိုရမ်တစ်ခုမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ် သူ့ကို တကယ့်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကညွှန်တာ။ အဲဒီဆရာဝန်က လိင်ကျန်းမာရေးအထူးပြုပညာရှင်ဖြစ်ပြီး အဲဒီဖိုရမ်ကို ဦးစီးပါတယ်။
အရှုံးမရှိပါဘူးလေ ဆိုပြီး Hammer of Thor ကိုသောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဈေးကချိုတယ်ဗျ။ သူ့ကို အလွန်ဆုံး ၃ရက်လောက်ပဲသုံးလိုက်တာ ရလဒ်က သိသာတယ်။ ထောင်မတ်မှုက သိသိသာသာတိုးတက်လာပြီး လိင်တံက သံမဏိချောင်းလိုမာနေတယ်။ တစ်လက်မကျော်ကျော်လည်း ပိုကြီးလာသေးတယ်။
ဒီအနေအထားကနေ အရှုံးသမားကို ယောကျာ်းပီသသူအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်မလားဆိုတာ အတည်ပြုချင်လို့…ပြည့်တန်ဆာသွားရှာခဲ့တယ်..
တစ်ချီတည်း ၂ နာရီကြာခဲ့တယ်ဗျာ…
ကိုယ့်လူတို့ ကျွန်တော်အံ့သြမိခဲ့တယ်။ အဲ့အမျိုးသမီးကို အနောက်ကနေ ဆက်ဆံတာ သူစိတ်ကျေနပ်ပြီးအော်တဲ့အသံ တိုက်ခန်းထောင့်ကကြားရလောက်တယ်။ ထပ်ကာထပ်ကာ ဆက်ဆံရင်း တော်တော်နဲ့မပြီးနိုင်တော့ဘူး။ သူ့ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆက်ဆံတာ မိနစ် ၄၀။ သူမက နှစ်ခါတောင်ပြီးသွားတယ်။ ကျွန်တော်က ဆက်ပြီး ဖြစ်ချင်နေတုန်းပဲ။
နောက်တစ်ပတ်လည်း လိင်မဆက်ဆံခင် ၁၅ မိနစ်မှာ Hammer of Thor သောက်တယ်။ ဒီကုန်ပစ္စည်းက လိင်ဆက်ဆံချိန်ပိုကြာစေရုံမက လိင်တံပါပိုကြီးစေတယ်ဆိုတာ သေချာတယ်။အစကတော့ ကျွန်တော်မယုံခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ၁၁ ရက်ကြာတော့ လိင်တံက ၄.၅ စင်တီမီတာ ပိုကြီးလာတယ်။
အခုဆို Hammer of Thor မသောက်ဖြစ်တာ တစ်လရှိပြီ။ ဒါပေမယ့် အာနိသင်အပြည့်အဝရှိနေတုန်းပဲ။မိန်းမတွေဘယ်လောက်များများနဲ့နေနေ လိင်တံက အေးဆေးပဲပုံမပျက်။ ဘယ်မိန်းမကိုမဆို တစ်ညကို ၃-၄ ကြိမ်လောက် ပြီးအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်။ မရပ်မနား တစ်နာရီကျော်လောက် ဆက်ဆံပေးနိုင်တာကိုး။ ပြီးတော့ သုက်လွှတ်ပြီးတာတောင် လိင်တံက ထောင်နေတုန်းဆိုတော့ လှုံ့ဆော်နှိုးဆွတဲ့နေရာမှာလည်း အားကောင်းတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လုံးဝယုံကြည်မှုရှိတယ်။ ဘယ်မိန်းမအတွက်မဆို အကောင်းဆုံးအဖော်ဖြစ်နိုင်နေပြီ။ဒါ့ကြောင့် ဒီဆေးကို လူတိုင်းအတွက် ညွှန်းပေးနိုင်ပါတယ်။ လျှို့ဝှက်ချက်တော့ထားပေးပေါ့။
ပစ္စည်းရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဝဘ်ဆိုက်ကနေပဲ မှာဝယ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ ကျွန်တော်က ၅၀% လျှော့ဈေးပေးတဲ့ လက်ဆောင်ကတ်တစ်ကတ်ရထားတယ်။ လျှော့ဈေးက မကြာခင် ရက်ကုန်ဆုံးတော့မယ်လို့ ပြောနေကြတယ်။
လိင်တံပိုကြီးလေ ဆက်ဆံရပိုကောင်းလေ။ Hammer of Thor အကြိုးကြေးဇူးမြား
စစ်ထဲဝင်လိုက်လို့ ဘဝမှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာတယ်လို့ ပြောမယ်ဆို ပြောလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ ဘွတ်ဖိနပ်တွေကို ပြောင်လက်နေတဲ့အထိတိုက်ဖို့နဲ့ နေ့တိုင်း မနက် ၆ နာရီထဖို့သင်ယူရတဲ့အပြင် သိလာရတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုရှိတယ် – မိန်းမတွေက ကျွန်တော်တို့ကို လိမ်နေတယ် “တောင်းပန်ပါတယ်.ကျွန်မတို့ ကွာခြားလွန်းနေတယ် ” ၊” ရှင့်အမှားမဟုတ်ပါဘူး၊ကျွန်မအမှားပါ “ဘာညာ အကြောင်းပြချက်နဲ့ငြင်းလာတဲ့အခါ အယုံမလွယ်လိုက်နဲ့။ တကယ်တော့ သူက ခင်ဗျားရဲ့လိင်တံအရွယ်အစားကို စိတ်ပျက်နေတာဖြစ်လိမ့်မယ် .
အမော်နဲ့ကျွန်တော် ၆လ လောက်အတူနေခဲ့ကြတယ်။ဟိုကိစ္စအပါအဝင် အရာရာအဆင်ပြေခဲ့တယ်ပေါ့။ဒါပေမယ့် အချိန်ကြာလာတော့ သူမဖက်က လိင်ကိစ္စကိုစငြင်းပယ်လာတယ်။ဆက်တိုက်ပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က သဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့ လမ်းခွဲတာကောင်းမယ်လို့ ပေါ်တင်ပြောလာခဲ့တယ်။ သူမကို ပြန်လာပါလို့ ခခယယတောင်းပန်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ထင်တာ ကျွန်တော့ဘက်ကအမှားရှိမှာပဲလို့။ နောက်မှသိရတာ သူက ဘောလုံးအသင်းခေါင်းဆောင်နဲ့တွဲနေတာ။ မြို့မှာရှိတဲ့စကီတွေအားလုံးနီးနီးကို အိတ်ထဲထည့်ဖူးတဲ့ကောင်ပေါ့။
ကျွန်တော်စစ်ထဲဝင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တပ်ထဲရောက်ရင် သူမရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူကို နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာတွေ့တဲ့သူငယ်ချင်းတွေက တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်ရင်ဖွင့်ခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းအကြောင်း စပြီး စားမြုံ့ပြန်ပါတယ်။ သူက အသက် ၂၀လောက်မှာ အပျော်မယ် တစ်ရာလောက်နဲ့နေဖူးပြီးပြီတဲ့။ သူ့မှာ ရည်းစားကလည်း နှစ်ယောက် သုံးယောက်ထားခဲ့တာ။ လူပုံစံက ကုပ်ချောင်းချောင်းနဲ့ပိန်ကပ်ကလေး။ ဆိုတော့ လူရှိန်အောင် ဇွတ်ဖိန့်နေတယ် ထင်မိလိုက်တယ်။ နောက်တော့ သတိထားမိတာက သူ့ကို ကောင်မလေးတွေ မက်ဆေ့ပို့လာကြတာ မနည်းမနောပဲ။ နို့ဖော်ထားတဲ့ဝတ်လစ်စလစ်ပုံတွေလည်းပို့တာ တကယ်ကြီး။
သူနဲ့စကားပြောကြည့်ပြီး ဘာလို့ဒီလောက်စွံတာလဲဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်အဖြေကိုရှာဖို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ သူက သူ့အကြောင်းကို ပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။
စွံရတဲ့အကြောင်းရင်းက လိင်တံကြောင့်ပါပဲတဲ့။ အတိအကျပြောရရင် အရမ်းကြီးနေလို့ပါတဲ့။ မိန်းကလေးတွေက အဲဒါကိုမြင်ရင် စိတ်ကြွလာပြီး လိင်ဆက်ဆံဖို့ တောင်းဆိုလာကြတယ်ဆိုပဲ။ ဒါပေမယ့် အမြဲတော့ ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
သူကပုံမှန်ဆို တစ်နေ့လုံးကွန်ပျူတာဂိမ်းထိုင်ဆော့လေ့ရှိတဲ့ ကုပ်ချောင်းချောင်းလေးဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးတွေနဲ့ရောရောနှောနှောမနေတတ်ဘူး။ တစ်ခါတော့ အင်တာနက်မှာ လိင်တံကြီးဆေးကိုတွေ့လိုက်လို့ အပျော်တမ်း စမ်းသောက်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့ရော ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲ။ သူ့ရဲ့လိင်တံက တကယ်ကိုကြီးလာ၊ရှည်လာခဲ့တယ်။ .
ရလဒ်ကိုအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့သူက လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျောင်းက အတန်းတူ ခပ်ဟော့ဟော့ဆော်တစ်ဗွေကို လှမ်းခေါ်ပြီး ကောင်းကောင်းပျော်ပလိုက်တယ်။ အမျိုးသမီးက အရမ်းကိုသဘောကျသွားပြီး သူ့လိင်တံအရမ်းကြီးတဲ့အကြောင်း တစ်ကျောင်းလုံးဖွလိုက်ရောတဲ့။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး သူ့ဘဝက ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။
သူက တကယ့်ပျော်ပွဲတွေကို အိမ်မှာစီစဉ်ပြီး ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေတောင်ရိုက်ခဲ့တယ်။ သူ့အိပ်ခန်းမှာ အလန်းစားဆော်တွေ အမြဲရှိတယ်။ အဲဒီမိန်းမတွေက သူလိုသမျှကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်။သူပြန်လုပ်ပေးရမှာက အဲဒီလိင်တံကြီးနဲ့သူတို့ပျော်အောင် ပြန်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တစ်ခုပဲ။သူက တပ်ထဲက ဆေးအကူ နာ့စ်မကိုတောင် ဖန်နိုင်ခဲ့တာ အခုဆို သူမက ပတ်တီးကူစည်းပေးဖို့ဆိုပြီး သူ့ကိုအမြဲအကြောင်းရှာခေါ်နေပြီ။
သူ့အကြောင်းကို ကျွန်တော်ဖောက်သည်ချနေတာ နှိပ်စက်ရာတော့ကျလိမ့်မယ်(သူက ဒီအကြောင်းကို ဘယ်သူ့မှမပြောဖို့ တိုးတိုးမှာထားတယ်)။အခုတော့ အဲဒီဆေးကို ဘယ်မှာရနိုင်လဲ ကျွန်တော်သိရပြီ။ ကျွန်တော်က သူနဲမတူလို့ ခင်ဗျားတို့အတွက် အကျိုးရှိမယ်ဆို ဒီအကြောင်းကို မျှဝေဖို့ကို မတားပါဘူး။ အဲဒီဆေးက – Hammer of Thor လို့ခေါ်တယ်။ သူ့ရဲ့တရားဝင်ဝဘ်ဆိုက်မှာပဲ မှာယူလို့ရမှာဆိုတော့ တခြားမှာမရောင်းလောက်ဘူး။ ဆေးမှာပါတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက လိင်တံကိုသွေးလည်ပတ်မှုပိုကောင်းစေပြီး ထောင်မတ်မှုကိုအကြာကြီးထိန်းထားနိုင်တယ်။ လိင်တံတစ်ရှူးတွေပြန့်ကားပြီး အရွယ်အစားကို အရှည်၊လုံးပတ်နဲ့ထိပ်ပိုင်း အချိုးညီညီကြီးထွားလာစေတယ်။ .
ဒါ့ကြောင့် စစ်မှုထမ်းနှစ်ပြည့်ခါနီးတစ်လအလိုမှာပဲ အဲဒီ ဆေးကို မှာလိုက်ပြီး Hammer of Thor စသောက်ကြည့်ခဲ့တယ်။ နည်းနည်းပဲထူးလာတယ်ဆိုပေမယ့် တော်တော်တော့ တောင့်သား။ အဲဒီဆေးမပါဘဲ​တောင် ဆက်ဆံချင်နေခဲ့တာ အခုတော့ ပိုအရှိန်ပြင်းနိုင်နေပြီ…
တစ်ပတ်ကြာတော့ ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်တယ်။လိင်တံက မီလီလီတာ အနည်းငယ်လောက်ပိုကြီးလာတယ်။ တစ်လအတွင်းမှာ ၂ စင်တီမီတာလောက် ထွားလာတယ်။ ဒီတိုင်းကြည့်ရင်တောင် သိသာနေပြီပေါ့။ အို ဘယ်ပြောကောင်းလိုက်မလဲ..ရသမျှဆော်တွေ အားရပါးရဆော်လိုက်ချင်တာပေါ့ အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကျန်သေးတယ်။ အဲဒါက ကျွန်တော်အရမ်းကိုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိတယ်လို့ အမော့်ကို သက်သေပြချင်သေးတာလေ။
အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ပြန်ရောက်တဲ့အထိမ်းအမှတ် ပါတီပွဲလုပ်ပြီး သိသမျှလူတွေဖိတ်လိုက်တယ်။ တော်တော်လေးမူးလာတော့ ကျောင်းကအချောဆုံးကောင်မလေး ဓာတ်ပုံမော်ဒယ် အိန်ဂျယ့်ကိုရွေးလိုက်တယ်။ သူ့ကို ရည်းစားကထားသွားတာ သိပ်မကြာသေးဘူးဆိုတော့ နှစ်သိမ့်မှုလိုအပ်နေမှာပဲလေ။
အံ့သြလောက်စရာပဲ သူ့ကိုဆွဲဆောင်ဖို့သိပ်မကြာလိုက်ရဘူး။ အကုန်လုံးအိမ်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာ သူက အိပ်ခန်းထဲမှာကျန်ခဲ့တယ်။ သူမနဲ့ပျော်ပလိုက်တာ မနက်မိုးသောက်တဲ့အထိပဲ။ သူရဲ့ညည်းသံက ကျယ်လွန်းလို့ အိမ်နီးချင်းတွေက နံရံကိုခဏခဏထုပြီးသတိပေးတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။ တစ်ယောက်ဆို မနက်ကျ ရဲတောင်ခေါ်လိုက်သေးတယ်။
ဘာပြောကောင်းမလဲ ကျွန်တော်အရမ်းအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီလေ။ အဲဒီနေ့ကတည်းကစပြီး အရင်ကဘယ်သူ့ကိုမှလက်မခံတဲ့ အိန်ဂျယ်က နေ့တိုင်းကျွန်တော့ကိုဖုန်းခေါ်ပြီး တွေ့ဖို့ချိန်းတယ်။ အရင်ဆော်က ဘာလို့ထားသွားလဲဆိုတာ သူနားမလည်နိုင်တဲ့အကြောင်း တွေ့တိုင်းပြောတယ်။ ဒီလောက်မိုက်တဲ့ဘဲကို ထားခဲ့တာ ရူးမိုက်တဲ့မိန်းမပဲတဲ့။
ယောကျာ်းတို့သဘာဝအတိုင်းပဲကျွန်တော့ရည်မှန်းချက်က ဒီလောက်နဲ့ရပ်မှာမဟုတ်သေးဘူး။ ကျွန်တော့စံချိန်က ဆော်အယောက် ၁၀၀ မပြည့်မချင်း မပြီးဆုံးဘူး။ တစ်ဝက်နီးပါးရခဲ့ပြီးပြီဆိုပေမယ့်ပေါ့။
မှန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲ ကျွန်တော့အကြောင်းကို အမော်သိသွားခဲ့တယ်။ မကြာသေးခင်ကမှ သူကျွန်တော့ဆီဖုန်းဆက်ပြီးတွေ့ဖို့ပြောတယ်။ သူ့ကောင်က သူ့ကိုအမြဲလိမ်ညာလှည့်စားခဲ့လို့ အရမ်းခံစားခဲ့ရတယ်တဲ့။ အရင်အတိုင်းပြန်နေချင်တယ်ဆိုပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့အစီအစဉ်က ဒါမဟုတ်ဘူး။
ကဲ ကိုယ့်လူတို့..ခင်ဗျားသိသင့်တာက – လိင်တံကသေးနေရင် ခင်ဗျားဘယ်လောက်ကြွက်သားအားကောင်းကောင်း၊ ဘယ်လောက်ရိုမန့်တစ်ဆန်ဆန် မိန်းမတွေကို ဆွဲဆောင်မထားနိုင်ဘူး။ အဲဒါသေချာတယ်။ လိင်ကိစ္စအရမ်းကောင်းချင်ရင် ကိုယ့်လိင်တံကို တစ်ဆင့်မြှင့်ပေတော့။ အထူးသဖြင့် အခုဆိုဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။ ခွဲစိတ်စရာမလိုဘူး၊ ဒီဆေးလေးသောက်လိုက်ရုံပဲ။ Hammer of Thor ကိုသာ သောက်လိုက်